अभिनेत्री श्रीदेवीको हत्या भएको खुलासा, हत्यामा दाउदको हात ! | Rajmarga
अभिनेत्री श्रीदेवीको हत्या भएको खुलासा, हत्यामा दाउदको हात !
२४ फेब्रुअरीमा दुबईको होटलको बाथरुममा भारतीय चलचित्रकी चलचित्र अभिनेत्री श्रीदेवीको बाथटबमा डुबेर मृत्यु भएको थियो । तर, यो घटनालाई कसैले पत्याएका थिएनन् ।
धेरैले यो मृत्युलाई स्वभाविक मानेका पनि छैनन् । श्रीदेवीको मृत्युका पछाडि ठुलो षड्यन्त्र रहेको धेरैको आशंका छ । एक जना चलचित्र निर्माताले पनि यही दावी गरेका थिए र उनले अदालतमा छानविनको माग गर्दै रिटसमेत आलेका थिए । तर, उनको रिट अस्वीकृत भएको थियो । उनका अनुसार बाथटब मात्र ५ फिट गहिरो हुन्छ, त्यसमा श्रीदेवी कसरी डुब्छिन् ?
अब दिल्लीका अवकाश प्राप्त एसीपी वेदभुषणका अनुसार यो षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको हत्या हो । उनलाई आशंका छ कि यसमा अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमतको हात हुन सक्छ, जसको भारतले लामो समयदेखि खोजी गरिरहेको छ।
दाउदको दुबईमा राम्रो पहुँच छ। दुबईका राजपरिवारसँग पनि उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । वेदभुषणले दावी गरेका छन् कि उनी एक रातका लागि दुबईको सोही होटलमा बास बसेका थिए जहाँ श्रीदेवीको मृत्यु भएको थियो । वेदभुषण यो घटनाको छानविन गर्न चाहन्छन् र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको बताएका छन् ।
दुबईस्थित होटल जुमेराह इमिरेट्समा श्रीदेवीको मृत्यु भएको थियो । दुबई प्रहरीले उनको मृत्यु पानीमा डुबेका कारण भएको बताएको थियो । प्रहरीले श्रीदेवीलाई होटलकै एउटा कोठाको बाथटबमा डुबेको अवस्थामा फेला पारेको जनाएको थियो । एजेन्सी
Previous post: चलचित्र ‘बाबु कान्छा’फष्टलुक पोष्टर र रिलिज मिति सार्वजनिक
Next post: श्रीमतीले सम्बन्ध बनाउन नदिएपछि यी जापानी पुरुषले यसरी डेक्स डल रोजे
नायिका साम्राज्ञीले यस्तो सम्म भनिन् :बरु चलचित्र नै छोड्छु तर मलाई “गाउँले मन पर्दैन”